China New Energy Izicelo ifektri abakhiqizi | Yongjie
Ingxubevange Main: 1050/1060/1070/1235/3003/3005/5052/5083/8021
Izicelo: igobolondo lebhethri yamandla, izixhumi, ibhokisi lepakethe lamandla webhethri, igumbi lebhethri lamandla, izikhwama zebhethri le-lithium ion, iseli lebhethri
Ukulinganiswa kokukhanya kwezimoto kuyindlela yokuthuthuka embonini yezimoto zomhlaba, futhi okokuncanyelwa kokukalwa kokukhanya kwezimoto yi-aluminium alloy. Ukusetshenziswa kwezinto ze-aluminium alloy ezimotweni kubaluleke kakhulu ekuxazululeni ukusweleka kwamandla kagesi eChina, ukungcoliswa kwemvelo nokusebenza kahle kokuhamba okuphansi. Ukuhlaziywa Ukusetshenziswa kwezinsimbi ze-aluminium alloy in the lightweight of new energy cars kuyethulwa, futhi ukuthuthukiswa okusheshayo kwezimoto ezintsha zamandla kuzoletha amathuba amakhulu emakethe ekuthuthukiseni izinto ze-aluminium alloy. Kuyavezwa ukuthi ukusetshenziswa kwe-aluminium alloy nezinye izinto ezingasindi kanye nokwakhiwa okusha kuyizimoto ezintsha zamandla zinokusizakala okuyisisekelo kwezobuchwepheshe njengokuphepha, ukonga ugesi, nokuvikelwa kwemvelo kanye nezinyathelo ezinkulu ezingasindi.
I-Aluminium alloy ine-conductivity enhle kagesi nokusebenza, futhi iyinto enhle yokushabalalisa ukushisa, efanelekile kwimikhiqizo yamandla ahlukahlukene njengokufakwa kwamandla okuphezulu, amandla kagesi aqinisiwe, amandla kagesi wokuxhumana, izinto zokuhlanza amandla, imishini yomsakazo nethelevishini, amandla kagesi we-inverter, njll. Iyasetshenziswa futhi emkhakheni wemikhiqizo kagesi yamandla njengezinsimbi zokulawula okuzenzakalelayo.
I-aluminium foil inganciphisa ukuqhathanisa kwebhethri, inciphise imiphumela eshisayo, ithuthukise ukusebenza kwesilinganiso, futhi inciphise ukumelana kwangaphakathi kwebhethri nokukhuphuka kwangaphakathi kokuqina kokuhamba ngesikhathi sokuhamba ngebhayisikili; okwesibili, ukusebenzisa ucwecwe lwe-aluminium ukupakisha amabhethri kungakhuphula impilo yomjikelezo webhethri futhi kuthuthukise ukunamathela phakathi kwezinto ezisebenzayo nabaqoqi bamanje. Nciphisa izindleko zokukhiqiza zefilimu; iphuzu elibalulekile ukuthi ukusetshenziswa kwe-aluminium foil yokupakisha amabhethri e-lithium kungathuthukisa kakhulu ukuvumelana kwepakethe yebhethri futhi kunciphise kakhulu izindleko zokukhiqizwa kwebhethri.
Izingxenye ze-aluminium zezimoto ezintsha zamandla ikakhulukazi umzimba, isondo, i-chassis, ugongolo lokulwa nokushayisana, phansi, ibhethri kagesi nesihlalo.
Ukuze kwandiswe i-mileage, izimoto ezintsha zamandla kagesi zidinga inani elikhulu lamamojula wokuhlanganiswa kwebhethri ye-lithium. Imodyuli ngayinye yakhiwe ngamabhokisi amaningi ebhethri. Ngale ndlela, ikhwalithi yebhokisi ngalinye lebhethri inomthelela omkhulu kuzinga lemodyuli yebhethri lonke. . Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-aluminium alloy njengezinto zokwenza amakhasethi webhethri sekuyinto engenakugwemeka yokupakisha kwebhethri yamandla.
Langaphambilini Izinto zokuhambisa uhlelo lokushisa ezishisayo
Olandelayo: Izinto zokuxhumana nezokusebenza kwe-elekthronikhi
Ezokuxhumana neze-elekthronikhi mat ...